Idaacadda VOA oo lumisay dhagaystayaal gaaraya 3000,000- Akhriso | Puntland Today
Idaacadda VOA oo lumisay dhagaystayaal gaaraya 3000,000- Akhriso
Idaacadda VOA-da oo inta badan laga dhagaysto dhulka Soomaalidu ay degto ayaa hadda lumisay dhagaystayaal gaaraya qiyaastii 3000,000 ( Sadex Malyan) oo ku nool deegaanada Puntland, kadib markii Idaacadaha guduhu joojiyeen soo gud binteeda.
Maamulka Idaacadaha joojiyey soo gud binta Idaacada VOA-da ayaa sheegay in muddo ay si billaash ah hawadooda ugu mariyeen dadweynuhu dhagaysiga VOA-da, waxay tilmaameen in Idaacadaha kale ee dalka ku yaak ay VOA-da kusii daayaan dhaqaale.
Magaalada Garowe maalmahan Idaacadaha gudaha lagama dhagaysan Idaacada VOA Laanteeda afka Soomaaliga, waxaana la ii sheegay in maamulka ujooga Garowe uu haatan wado da daal lagu xalinayo tabashada.
Dadka ku nool deegaanada Puntland ayaa lagu qiyaasa 4000,000 ( afar Malyan) Inta badan waxay VOA-da ka dhagaysan jireen idaacadaha gudaha , waxay dadka qaarkii maalmahan isweydiinayeen waxa ku dhacay , qaybtood ayaa ku weydiinaya sababta loo maqli waayey Idaacadda.
Waa markii ugu horasay oo Idaacadaha guduhu si iskooda ku joojiyaan Idaacadda VOA, ,marka laga yimaado amaro dowladda kasoo baxay oo horay dhowr jeer VOA-da laga mamnuucay deeganada Puntland.